Buy Apartment Rent (ID-245) (500,000Ks) in ကြည့်မြင်တိုင် on ipivi.com
1050 sqft apartment for rent in Kyee Min Daing Township, near Orange Mini Mart. Apartment has Living-room, Two Bed-rooms, Kitchen and Bath-rooms. Three air-conditioners are already included.
Asking Price -5Lakhs (Nego)
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ၁၀၅၀စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသော ငှားရန်တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ Orange Mini Mart သို့သွားရောက်ရန် နီးပါသည်။ တိုက်ခန်းအတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများ ဖွဲ့စည်းပါရှိပါသည်။ လေအေးပေးစက် သုံးလုံး တပ်ဆင်ပါရှိပြီးဖြစ်သည်။
တိုက်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခ - ၅သိန်း (ညှိနှိုင်း)
ငှားရန်ရှိသော တိုက်ခန်း (ID-245)
Malikha Condo for Sale
Condo for rent @ Royal Malikha
Modern unit for rent at (Yankin)
အမည်: Apartment Rent (ID-245)